Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Scorpion sting ကင်းသုံးကင်း တကင်းပြီးသလား
9 May 11, 18:40
ကျနော့် ခြေထောက်ကို အကောင်တစ်ကောင် ကိုက်သွားတယ်။ ဘာကောင်မှန်း မသိဘူး။ အဆိပ်ဖြေဆေး ဘာသောက်သင့်လဲ ပြောပြပေးပါ။
10 May 11, 12:59
ကင်းခြေများ ကိုက်ခံရတာ ခြေထောက်ယောင်နေတယ်။ ဘာသောက်သင့်လဲ။ ဆရာ့ဆိုဒ်မှာ အဆိပ်ရှိတဲ့အကောင် ကိုက်ခံရရင် ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ အချိန်ရရင် ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။
အရေးအကြီးဆုံး ကင်း သုံးကင်း ရှိတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ Centipede ကင်းခြေများ၊ Scorpion ကင်းမြီးကောက်နဲ့ Black-earth Scorpion ကင်းမ-လက်မည်း (ကင်းပုစွန်) တွေကို ပြောကြတာ များမယ်ထင်တယ်။ တခြားကင်းတွေလဲ ရှိသေးတယ်။ Millipede ကင်းနားသန်၊ Scolopendra ကင်းစုန်း၊ Grass-lizard ကင်းလိပ်ချော။ နောက်ပြီး Cuttle fish ကင်းမွန် ကတော့ စားရတဲ့ ငါးအုပ်စုထဲက ဖြစ်တယ်။
လူတယောက်ဟာ ကင်းသုံးကင်းမှာ တကင်း ပြီးတယ်လဲ ပြောကြတယ်။ ဒီလို အကောင်တွေ ကိုက်ရင် သေတယ် ဆိုတာတော့ ရှားတယ်။ ဘယ်အကောင် ကိုက်ကိုက် ဖြစ်တာတွေကလဲ ဆင်တူသေးတယ်။ နဲနဲခံရတာနဲ့ များများ ခံရတာတော့ ရှိမှာပေါ့။ (အလာဂျီ) ဖြစ်မှသာ ဆိုးတယ်။ အင်ပြင်ထတာကနေ ပျို့တာ-အန်တာအပြင် (ရှော့ခ်) ရတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။
စားလို့ရတာ အကုန်စားတဲ့ တရုတ်တွေက ကင်းခြေများကို "ဝူကုန်း" ခေါ်တယ်လို့ ပြည်ပပို့ကုန် တင်သွင်းချင်သူတွေအတွက် ကြော်ညာမှာ ရေးထားတယ်။ ကင်းခြေများဟာ ပိုးနသန်ကောင်နဲ့ မှားခေါ်တာခံရတတ်တဲ့ အကောင် ဖြစ်တယ်။ အဆစ်ပေါင်း ၁၂-၁ဝဝ ဆစ် နဲ့ ခြေထောက်တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ချွန်ထက် မာကျောပြီး၊ အမြီးနှစ်ခွမှာရှိတဲ့ (ဂလင်း) အိတ်က အဆိပ် ထွက်လာမယ်။
• အကိုက်ခံရရင် နာမယ်၊ ရောင်မယ်၊ နီရဲနေမယ်၊
• တခါတလေ အနီးအနားက တက်စေ့တွေ ရောင်လာမယ်။
• ကိုက်တဲ့နေရာ ထုံကျင်နေမယ်။
• အကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို ဆပ်ပြာနဲ့ရေနဲ့ ကောင်းကောင်းဆေးကြောလိုက်ပါ။ အရက်ပြန်-အရက် မသုံးပါနဲ့။
• ရေခဲတင်ပေးပါ။ ၁ဝ မိနစ်တခါ တင်လိုက်၊ နားလိုက်လုပ်ပါ။
• ၄၈ နာရီအထိ အဆိပ်ဒဏ်ခံရနိုင်တယ်။ ဒါထက်ကြာကြာ သိပ်ဆိုးဝါးသူတွေလဲ ရှိတတ်တယ်။
• နာတာသက်သာအောင် Acetaminophen နဲ့ Ibuprofen တခုခုကို အစာနဲ့တွဲ သောက်ပါ။
• ရောင်တာ၊ ယားတာသက်သာအောင် Hydrocortisone cream လိမ်းဆေး တခုခုလိမ်းပါ။
• မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ATT မထိုးရသေးရင် ထိုးပါ။
• အနာဖြစ်သွားရင် ဆေးထည့်ပါ။ လိုအပ်ရင် ပိုးသေဆေးသောက်ပါ။
• အဆိပ်ကနေ သေစေတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။
• ဆိုးဝါးရင် (အလာဂျစ်) ဖြစ်ရင် အသက်ရှူရခက်လာမယ်၊ နှလုံးခုန်တာ မြန်လာမယ်၊ လည်ပင်းအစ်လာမယ်၊
• အရေးပေါ်ဌာနသွားရသူတွေကို ဆေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်မယ်။ အသက်ရှူကူဘို့လိုရင် လုပ်ပေးမယ်။ သွေးပြန်ကြောထဲ ဆေးသွင်းဘို့ လိုရင် လုပ်မယ်။ ဆေးလိုသူတွေကို ပေးမယ်။
ကင်းမြီးကောက်၊ ကင်းမ-လက်မည်း (ကင်းပုစွန်)
သူများတွေဆီမှာ ကင်းမြီးကောက်ကို ပိုနေရာပေးကြတယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်တာတောင် Scorpion King နှစ်ကား ရှိနေပြီ။ ဒီအကောင် အကြောင်းက ဆေးစာမှာလဲ နေရာပိုရတယ်။ ကင်းကိုက်ခံရတာဟာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းတဲ့ ဒေသတွေမှာ လူထုကျန်းမာရေး ပြဿနာတရပ် ဖြစ်တယ်။ နှစ်စဉ် လူ ၁့၂ သန်း အကိုက်ခံနေရတယ်လို့ စစ်တမ်းခုက ဆိုတယ်။ သူ့စာရင်းမှာ ၃၂၅ဝ ဦး သေဆုံးတယ်၊ မက်ဆီကိုမှာ တနှစ် လူ ၁ဝဝဝ သေပေမဲ့၊ အမေရိကားမှာတော့ ၁၁ နှစ်အတွင်း ၄ ယောက်သာ သေတယ်။ အမျိုးအစားပေါင်း ၁၅ဝဝ လောက်ထဲမှာ လူကို ဒုက္ခပေးတာက ၃ဝ-၅ဝ ရှိတယ်။ တရိဂံပုံက ဆိုးတယ်။ ငါးမြှောင့်ပုံက မဆိုးလှဘူး။ ဥပမာ Buthidae family ဖြစ်တယ်။ အာရှမှာ တွေ့နိုင်တာတွေက Mesobuthus, Buthotus နဲ့ Androctonus တွေ ဖြစ်တယ်။
သာမန်ကာရှန်ကာ ဖြစ်တာကို ရှေးဦးသူနာပြုလုပ်တာ၊ အနာအကိုက် သက်သာဆေး၊ (အင်တီဟစ်စ်တမင်း) ဆေးပေးတာနဲ့ ရတယ်။ ကလေးငယ်တွေနဲ့ အသက်ကြီးသူတွေ အကိုက်ခံရရင်တော့ မပေါ့ရဘူး။ အဆိပ် သိပ်ပြင်းတဲ့ အရပ်က အကောင်တွေအတွက် ဖြေဆေး ဖေါ်ထားတယ်။ ဥပမာ (အရီဇိုနာ) ကင်းတွေအတွက် Antivenin ပေါ်နေပြီ။ ဆိတ်သွေး ကနေ ဖေါ်ထားတာ။ တိရစ္ဆာန်ကနေ မထုတ်တဲ့ Anascorp ဆေးကိုလဲ စမ်းသပ်နေတယ်။
အကိုက်ခံရပြီး သွေးပြန်ကြောကတဆင့် အဆိပ်က ပြန့်သွားမယ်။ ၄-၇ မိနစ်မှာ လက္ခဏာတွေ ပြမယ်။ ၃ဝ မိနစ်မှာ အပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ ၄့၂ ကနေ ၁၃့၎ နာရီအထိ ကြာနိုင်ပြီး၊ ကိုယ်ထဲကနေ ဆီးကတဆင့် ထွက်သွားမယ်။ Neurotoxin, Cardiotoxin, Nephrotoxin, Hemolytic toxin, Phosphodiesterases, Phospholipases, Hyaluronidases, Glycosaminoglycans, Histamine, Serotonin, Tryptophan, Cytokine releasers အဆိပ် အမျိုးမျိုး ပါနိုင်တယ်။
• စူးရှပြီး လောင်သလို နာမယ်။ ယားလာမယ်၊ နီရဲ-ရောင်လာမယ်။ အထက်တက်ပြီး ခံစားလာရမယ်။
• လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက်သလို နေတယ်။ ရက်တွေ ကြာအောင် ခံစားနေရတတ်တယ်။
• ဖြစ်တဲ့နေရာကို ခေါက်ကြည့်ရင် မခံနိုင်ဘူး။ သူ့အပေါ် အဝတ်တင်တာတောင် မခံချင်ဘူး။
• အနီးအနားက တက်စေ့တွေ ရောင်တတ်တယ်။
• အကိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာ အဖုပေါက်နိုင်တယ်။ အနာလိုဖြစ်တာက ရှားတယ်။
• Centruroides အကောင်းက အသက်သာဆုံးနဲ့ C exilicauda က အဆိုးဆုံး။
(က) Neurologic signs အာရုံကြော-လက္ခဏာတွေ =
• Central nervous system signs ဗဟိုအာရုံကြော = ထုံတာ-ကျင်တာ ခြေတွေ-လက်တွေမှာ ဖြစ်မယ်၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်မယ်၊ စိတ်ရှုတ်ထွေးမယ်၊ ဂရောင်ခြောက်ခြားဖြစ်မယ်၊ အမူအယာ မတူတာ ဖြစ်မယ်။
• Autonomic nervous system signs (အော်တိုနောမစ်) အာရုံကြော =
1. Sympathetic signs (ဆင်ပသက်တစ်) = ကိုယ်ပူ၊ နှလုံးခုန်မြန်၊ သွေးဖိအားတက်၊ နှလုံးခုန် မမှန်၊ အဆုပ်ပွတာ၊ သွေးထဲမှာ အချိုဓါတ်များတာ။
2. Parasympathetic signs (ပါရာဆင်ပသက်စတစ်) = လေပြွန်ကျဉ်း၊ နှလုံးခုန်နှေး၊ သွေးဖိအားကျ၊ သွားရည်များ၊ မျက်ရည်များ၊ ဆီးများ၊ အစာခြေရည်များ၊ ဝမ်းလျှော၊ နှာရည်များ၊ လေပြွန်ထဲ အရည်များ၊ ဆီး-ဝမ်း အထိန်းရခက်၊ လိင်အင်္ဂါ ပြန်မကျအောင် သန်မာ၊ အမြိုရခက်၊ သူငယ်အိမ်ကျဉ်း။
(ခ) Somatic signs (ဆိုမက်တစ်) လက္ခဏာတွေ = ကြွက်သားတွေတင်း၊ စိတ်အလိုမပါဘဲ ကြွက်သားတွေလှုတ်၊
(ဂ) Cranial nerve signs ဦးနှောက်-အာရုံကြော-လက္ခဏာတွေ = အပေါ်မျက်ခွံ အောက်ကျ၊ မျက်လုံး လည်-လှုတ်-ကြည့်မကောင်း၊ သူငယ်အိမ်ကျယ်၊ လျှာလှုတ်၊ အမြိုရခက်၊ သွားရည်များ၊
(ဃ) Cardiovascular signs နှလုံး-လက္ခဏာတွေ = သွေးဖိအားတက်၊ သွေးဖိအားကျ၊ နှလုံးခုန်မြန်၊
(င) Respiratory signs အသက်ရှူလမ်း-လက္ခဏာတွေ = အသက်ရှူမြန်၊ အဆုပ်ပွ၊
(စ) Allergic signs (အလာဂျီ)-လက္ခဏာတွေ = အင်ပြင်ထ၊ ဖူးရောင်၊ လေပြွန်တုန်ခါ၊ (အနာဖလက်ဆစ်-ရှော့ခ်)၊
(ဆ) Gastrointestinal signs အစာလမ်း-လက္ခဏာတွေ = သွားရည်များ၊ အမျိုရခက်၊ ပျို့-အန်၊ အစာအိမ်တင်း၊ အစာခြေရည်များ၊ သကြားဓါတ်များ၊ အသဲအဆိပ်သင့်၊
1. Grade I အကိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာသာ နာတာနဲ့ ထုံကျင်တာ ၈၃%၊
2. Grade II အကိုက်ခံရတဲ့နေရာကနေ ဆက်ပြန့်ပြီး နာတာနဲ့ ထုံကျင်တာ ၉့၃%၊
3. Grade III ဦးနှောက်အာရုံကြောဖြစ်ဖြစ် (ဆိုမက်တစ်) အာရုံကြောဖြစ်ဖြစ် လက္ခဏာတွေရှိတာ ၄့၇%၊
4. Grade IV ဦးနှောက်အာရုံကြောရော (ဆိုမက်တစ်) အာရုံကြော လက္ခဏာတွေပါ တွဲရှိတာ ၃%။
• Oxygen လိုအပ်ရင် အောက်စီဂျင် ပေးမယ်။
• Intravenous fluids လိုအပ်ရင် သွေးပြန်ကြောထဲ ဆေးသွင်းတာ လုပ်ပေးမယ်။
• Antihistamines (အင်တီဟစ်တမင်း) ဆေးအုပ်စုထဲက Cimetidine နဲ့ Diphenhydramine ကို သုံးနိုင်တယ်။
ခံစားရတာတွေဟာ မိနစ်ပိုင်းကနေ ၃ ရက်အထိ ကြာနိုင်တယ်။ သေတဲ့အထိ ဖြစ်ရတာက အသက်ရှူလမ်းမှာ ဆိုးဝါးလာလို့ ဖြစ်တယ်။ Anaphylaxis (အနာဖလက်ဆစ်-ရှော့ခ်) ကြောင့် လေပြွန်ကျဉ်းတာ၊ လေပြွန်ထဲ လည်ချောင်းထဲမှာ အရည်တွေ ထွက်တာ၊ အသက်ရှူရာသုံးတဲ့ ကြွက်သားကြီး လေဖြတ်တာတွေ ဖြစ်တယ်။ ချက်ချင်း ထိထိရောက်ရောက် ဆေးကုရမယ်။
1. “သံလွင်ဆီကို ကင်းမလက်မည်း၊ ကင်းမြီးကောက်၊ ကင်းခြေများ စတဲ့ ကင်းအမျိုးမျိုးကိုက်ရင် ကင်းဆိပ်ဖြေဆေး အဖြစ် သုံးနိုင်တယ်။”
2. “ကြက်သွန်နီကို မီးဖုတ်၊ နွမ်းပျော့သွားတဲ့အခါ ငရုတ်ဆုံထဲ ကြိတ်ခြေပြီး၊ ထွက်လာတဲ့ အရည်ကို လိမ်းပေးပါ။ အဖတ်ကိုလည်း အုံစည်းပေးထားနိုင်တယ်။”
3. “မန်းကျည်းစေ့ကို သွေးပြီး လိမ်းပေးပါ” လို့ မှတ်သားရပါတယ်။
1. ပရိတ်ပရိကံ မြန်မာပြန် = သမ္မာဒေဝ နတ်ကောင်း-နတ်မြတ်တို့သည် မင်းဘေး၊ သူခိုးဓားပြဘေး၊ လူရိုင်း-လူပျက်ဘေး၊ ဘီလူးဘေး၊ မီးဘေး၊ ရေဘေး၊ မြေဘုတ်ဘီလူးဘေး၊ သစ်ငုတ်ခလုပ်ဘေး၊ ဆူးငြောင့်ဘေး၊ မကောင်းသော နက္ခတ်ဘေး၊ ဇနပုဒ်၌ ဖြစ်ပွားတတ်သော ကူးစက်ရောဂါဘေး၊ မတရားဘေး၊ အယူလွဲမှားဘေး၊ သူယုတ်မာဘေးနှင့် ကြမ်းတမ်းသော ဆင်၊ မြင်း၊ သားရဲ၊ နွား၊ခွေး၊ မြွေ၊ ကင်းမြီးကောက်၊ မြွေစိမ်း၊ သစ်၊ ဝံ၊ အောင်း၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ ဘီလူး၊ ရေစောင့်ဘီလူး တို့ကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်သော အထူးထူးသောဘေး၊ အထူးထူးသော ရောဂါ၊ အထူးထူးသော ဥပဒ္ဒဝေါများ မဖြစ်ပွားအောင် စောင့်ရှောက်တော်မူကြပါ။
2. ခန္ဓသုတ် မြန်မာပြန် (၇) = ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ရတနာသုံးပါးတို့သည် မနှိုင်းယှဉ်အပ် မြင့်မြတ်တော် မူကြပါပေသည်။ မြွေ၊ ကင်းမြီးကောက် စသော တိရစ္ဆာန်တို့သည် နှိုင်းယှဉ်စရာ ကိလေသာ ပြည့်ဝ ယုတ်ညံ့ ကြကုန်၏။